एमालेभित्रको द्वन्द्वको असर गोरखापत्रमा छताछुल्लः ओली तानाशाह - नेपालबहस
एमालेभित्रको द्वन्द्वको असर गोरखापत्रमा छताछुल्लः ओली तानाशाह
| १४:५६:२२ मा प्रकाशित
२० जेठ, काठमाडौं । सरकारी मुखपत्रका रुपमा प्रकाशनमा रहेको गोरखापत्र विस्तारै व्यावसायिक पत्रकारितातर्फ अग्रसर भएको हो की भन्ने भान दिने गरी आज पाठक समक्ष आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति चर्काे आलोचना गर्ने सामग्री प्रशासन गरेर गोरखापत्रले आफूलाई व्यावसायिकतातिर लैजान खोजेको देखिएको छ ।
आम नेपालीको करबाट सञ्चालित गोरखापत्रले यस्तै भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने धेरैले चाहेपनि हुन सकिरहेको थिएन । तर आज भने आम नेपालीकै चाहना बमोजिम गोरखापत्रले सामग्री प्रकाशन गरेको छ । अर्थात सरकार प्रमुखकै चर्काे आलोचना गरिएको छ ।
आज प्रकाशित गोरखापत्रको मूललेखमा प्रधानमन्त्री ओलीको निर्ममतापूर्वक खेदो खन्ने काम भएको छ । ओलीको खेदो खन्नेपनि उनकै पार्टीका चर्चित नेता हुन्– प्रदीप नेपाल । राजनीतिसँगै पत्रकारिता र साहित्य सिर्जनामा समेत अब्बल मानिएका नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको तानाशाह भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यति निर्मम आलोचना गरेर विगतमा कहिल्यै लेख, रचना वा समाचार प्रकाशन भएको थिएन । नेता नेपालको ठहर छ– ओली माक्र्सवादी नेता पनि होइनन्, बरु स्टालिनवादी नेता हुन् । यति मात्र होइन उनले लेखेका छन् – ओली तानाशाह हुन् र राज्यसत्ता दलाल पुँजीवादीको हातमा छ । कमिशन, ठेक्कापट्टामा नेताका आफन्तको संलग्नता छ ।
गोरखापत्रले प्रधानमन्त्रीकै यति खरो आलोचना गरेको घटनालाई ओली सरकारका तालुकदार मन्त्रीले कसरी लिन्छन्, त्यो त भोलिका दिनमा देखिनेछ नै । कदाचित गोरखापत्रलाई सम्पादकीय स्वतन्त्रता दिन खोजिएको भए सायद गोरखापत्रमा नेतृत्व गर्नेहरु थप पुरष्कृत हुनेछन् ।
एमालेको घरझगडाको बाछिटा
तर कथा यस्तो होइन । नेकपा एमाले भित्रको घर झगडाको बाछिटा गोरखापत्रसम्म पुगेको जानकार बताउँछन् । गोरखापत्रको नेतृत्व गर्ने कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारीलाई चक्मा दिने काम नेतृत्वले गर्दा यस्तो भएको हो । हालका निमित्त प्रधानसम्पादक श्रीधर आचार्य माधवकुमार नेपाल पक्षका पत्रकार हुन् । तर पद प्राप्ति र जोगाउनका लागि आचार्यले आफूलाई ओली समर्थक देखाउन खोजेका थिए ।
उनी आउने साउनमा रिटायर्ड हुँदैछन् । त्यसैले जानेबेला आफ्नो असली पहिचान दिएरै छाड्ने उनको चाहना यहाँ छलाछुल्ल भएको छ । हाल गोरखापत्रको लेख रचनाको संयोजन गर्ने काम एमाले समर्थित अर्का पत्रकार केपी गौतमले गर्दै आएका छन् । उनी विगतमा ओली समर्थित भएको दाबी गर्थे । तर यसअघिका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग उनको झगडा भएपछि भने उनले ओली क्याम्प छाडेको बताउने गरेका थिए ।
त्यसैले उचित मौकाको ताकमा आचार्य र गौतम थिए । त्यसको सही मौका उनीहरुलाई अहिले प्राप्त भयो । अनि आफ्नो भडास उनीहरुले यसरी निकालेको गोरखापत्रमा कार्यरत पत्रकारहरुको बुझाई छ ।
खनाल नभएको मौका छोपियो
गोकुल बाँस्कोटा मन्त्री हुँदै गोरखापत्रमा सल्लाहकार सम्पादकको भूमिकामा आएका पत्रकार गोपाल खनालको अनुपस्थितिमा यो सबै काण्ड भएको हो । खनालका पिताको देहवशान भएकाले उनी अहिले कार्यालय गएका छैनन् । त्यही मौका छोपेर आचार्य र गौतमले उक्त लेख प्रकाशन गरेका छन् । खनाल भएको अवस्था थियो भने उनले रोक्ने थिए ।
केपी गौतमले यसअघि पनि खनाललाई आफ्नो काममा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिने गरेका थिए । गौतमले खनाललाई सल्लाहकार सम्पादकका रुपमा कम र पार्टीको भाइ कार्यकर्ताका रुपमा बढी व्यवहार गर्ने गरेको त्यहीं कार्यरत एक पत्रकारले बताए ।
गोरखापत्र प्रकाशनको मूल जिम्मेवारी पाएका तालुकदार अर्थात प्रकाशक कृष्णमुरारी भण्डारी पनि निरीह छन् । प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रियपात्र भएपनि गोरखापत्रमा प्रकाशन हुने सामग्रीबारे उनलाई केही थाहा हुँदैन । उनलाई केपी गौतम र खनालले पनि रुचाउँदैनन् ।
त्यसैले एमालेभित्रको द्वन्द्वको असर गोरखापत्रमा प्रकाशक र सम्पादकबीच पनि देखिएको छ । अब यो घटनालाई उनले कसरी अगाडि बढाउँछन्, त्यो भने हेर्नै पर्ने हुन्छ ।
कम्फर्टेवलवालाहरुले देखे विदेशी हस्तक्षेप २ मिनेट पहिले
ओली जिम्मेवार बने एकै दिनमा सहमति हुन्छ ! ६ घण्टा पहिले
एमाले छिरेका पूर्व माओवादीमा चरम निराशा २२ घण्टा पहिले
यसै साता ओली–नेपालको संयुक्त वक्तब्य आउने सम्भावना ! २ दिन पहिले
एमाले एकताको पहल जारी ३ दिन पहिले
श्रमजीवी किसानलाई पेन्सनको ब्यवस्था गर्ने कांग्रेसकाे तयारीः डा. काेइराला १ मिनेट पहिले
एकतानगर बस्ती जोगाउन पक्कीनाला निर्माण गर्ने निर्णय ४ मिनेट पहिले
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरमूल्य उच्च दरमा वृद्धि ७ मिनेट पहिले
कर्णालीका राउटेका लागि एकीकृत नीति बनाउने तयारी १७ मिनेट पहिले
कांग्रेसलाई लाग्यो महाधिवेशनः देउवामा बढ्यो सकस १९ मिनेट पहिले
कोरोनाको मुख्यथलो बन्दै रोपाइँ २४ मिनेट पहिले
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी ३१ मिनेट पहिले
सरकारी एम्बुलेन्स प्रयोगबिहीन हुँदा बिरामी मर्कामा ४० मिनेट पहिले
अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले अवितरित हकप्रद लिलामी ल्याउँदै ४२ मिनेट पहिले
मलाई त तै सुवा मन पडी बजारमा सार्वजनिक ५५ मिनेट पहिले
योग परम्परालाई नयाँ उचाइबाट अघि बढाइनुपर्छः उपप्रम पौडेल ५९ मिनेट पहिले
अपि पावर कम्पनीको हकप्रद शेयरमा असार ९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने ५९ मिनेट पहिले
सल्लेरीका विस्थापित परिवारलाई हेलिकप्टरबाट राहत सामग्री पुर्याइयो १ घण्टा पहिले
अग्रणी शक्ति बनाउन महाधिवेशनः अध्यक्ष थापा १९ घण्टा पहिले
तारकेश्वरको आइसोलेसन केन्द्रलाई दुई थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग ४ घण्टा पहिले
बाढीले आफ्नो घर खेत बगाएको ठाउँ हेदै वृद्ध २१ घण्टा पहिले
मेलम्चीका बाढीपीडितलाई विश्व हिन्दू परिषद नेपालको सहयोग १८ घण्टा पहिले
नेपाल बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्दै २२ घण्टा पहिले
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा एक खर्ब निर्यात ७ दिन पहिले
सञ्चारमन्त्री थापाद्धारा काउन्सिलको अवलोकन ६ दिन पहिले
युरोकप फुटबलमा पोर्चुगलमाथि जर्मनीको सानदार जित २ दिन पहिले
मेलम्ची–हेलम्बु जोड्ने मोटर बाटो निर्माण जारी २१ घण्टा पहिले
बाढीपहिरोमा परी तीनको मृत्यु : ११ बेपत्ता, सातजना घाइते ! ५ दिन पहिले
स्यालीबजारमा ग्यास पड्किँदा आमाछोरा घाइते ३ हप्ता पहिले
बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट एक महिलाको ज्यान गयो ३ हप्ता पहिले
निषेधाज्ञाको मौका छोपेर म्याद सकिएको बीउ बिक्री ३ हप्ता पहिले
प्रहरीकाे सक्रियतामा देशभरबाट दश हजार अक्सिजन सिलिण्डर संकलन ४ हप्ता पहिले
संक्रमितलाई सहयोग गरी जिल्लावासीको मन जितेका युवा २ हप्ता पहिले
बन्चरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, आरोपित प्रहरी नियन्त्रणमा ३ दिन पहिले
केरुङ च्छो ताल फुट्ने जोखिम कायमै ११ महिना पहिले
वीरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा चार अर्ब ४८ करोडकाे बजेट सार्वजनिक २ वर्ष पहिले
रेशम चौधरीको विडम्बना : जनताले सांसद बनाए, अदालतले कैदी बनायो, सरकारले साङ्लो लगायो २ वर्ष पहिले